Satashikhabar.com शिवसताक्षीको आगामी नेतृत्व कसको काँधमा आउला ? - satashikhabar.com
शिवसताक्षीको आगामी नेतृत्व कसको काँधमा आउला ?
२६ बैशाख २०७९, सोमबार २२:३१
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा प्रमुख पदका लागि ९ जना र उप–प्रमुख पदका लागि ६ जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल छ भने सत्तारुढ गठबन्दन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चुनावी तालमेलबाट बाहिरिएको छ ।
प्रमुख पदमा नेकपा एसले उम्मेद्वारी नदिए पनि उप–प्रमुख पदमा भने उम्मेद्वारी दिएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले प्रमुखमा र उप–प्रमुख पदको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारी दिएको छ ।
प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसबाट पर्शुराम ढुङ्गाना र उप–प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्र भट्टराईको उम्मेद्वारी छ । त्यस्तै नेकपा एमाले र राप्रपा एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् भने अन्य दलले वडामा भने आफ्नो अनुकुलता हेरेर चुनावी तालमेल गरेका छन् । नेकपा एस, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लगायत अन्य साना पार्टीहरु तालमेल गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट मेघाहाङ थोप्रा (रोशन)ले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
त्यस्तै राप्रपाबाट मणीप्रसाद खड्काले उम्मेद्वारी दिएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलसहित शिवसताक्षीमा ८ औं राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र उम्मेद्धारले प्रमुख पदको दाबी गरेका छन् ।
उप–प्रमुखमा ६ जनाले दाबी गरेका छन् ११ वटा वडा रहेको यस नगरमा नगर प्रमुखको दाबी गर्दै थोप्रा, ढुङ्गानासहित जनता समाजवादीबाट पवन चाम्लिङ राई, राप्रपाबाट मणीप्रसाद खड्का, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीबाट डा. रामकृष्ण ताजपुरिया, संघीय लिम्बुवानको तर्फबाट प्रकाश लिङदेन, राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट देवीकुमार शेर्मा, मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट उमाकान्त सिटौला भने स्वतन्त्रबाट योगमणीले उम्मेद्वारी दिएर ३० गतेको चुनावी रणसंग्राममा होमिएका छन् ।
यता उप–प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएका भट्टराई, एमालेका नरमाया कार्की, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नवीन इजम, राप्रपाबाट बिष्णुकुमारी चम्लागाई, राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट भिमकुमारी योङहाङ र उन्नत लोकतान्त्रिकबाट श्रृजना मैनाली चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा यस पटकको स्थानीय चुनावमा ५५ हजार ३ सय ७८ जना मतदाता रहेका छन् । यस पालिकाको प्रमुख र उप–प्रमुखको बाजी कसले मार्ला भन्ने मतदातामा जनचासो चुलिँदैछ । एकातिर नेकपा एमाले र राप्रपा एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा छन् भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा कम्मर कसेर लागेका छन् । अन्य दलले समेत प्रमुख र उप–प्रमुखको दाबी गर्दै घरदैलो कार्यक्रमलाई तिब्रता दिइरहेका छन् ।
अहिले ठूला दल होस् या साना अथवा स्वतन्त्र सबै दलले आफ्ना उम्मेद्वारलाई विजयी गराउनका लागि मतदाताको घरघर र टोलटोलमा पुगेर आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।
पूर्वकै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा चिनिएको शिवसताक्षी त्यसमा पनि कृषिसँगै शहरीकरणतर्फ उन्मूख हँुदै गरेकोले सबै राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेबाट चन्द्रकुमार शेर्मा १३ हजार ४ सय ३९ मत प्राप्त गरी फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका पर्शुराम ढुङ्गानाले ८ हजार ९ सय ४८ मत प्राप्त गरेका थिए । उप–प्रमुख पदमा पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट भोजकुमारी नेपाल विजयी भएकी थिइन् उनले १३ हजार ४ सय ७२ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गरेको थियो गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने पनि गठबन्धनलाई जित्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
तर मतदाता संख्या वृद्धि हुनुका साथै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा अन्य दलमा मतदाता गएकाले पनि जित्ने पक्का रहेको गठबन्धन घटकले जनाएको छ । नेकपा एमाले भने